Mgbe ahụ, ahụrụ m otu anụ ọhia buru ibu, ka o si nꞌime oke osimiri na-arịpụta. Anụ ọhia a nwere isi asaa na mpi iri. Okpu eze iri dịkwa nꞌelu mpi ndị a. Aha e dekwasịrị nꞌisi asaa ahụ nꞌotu nꞌotu bụ aha ikwutọ na ikwuhie Chineke.
 Igurube ndị a nwere oyiyi dị ka inyinya a kwadebere maka ibu agha. Ha nwere ihe yiri okpu eze e ji ọlaedo kpụọ nꞌisi ha. Ihu ha dịkwa ka ihu mmadụ. Agịrị isi ha dị ogologo dị ka agịrị isi ụmụ nwanyị. Eze dị ha nꞌọnụ dịkwa ka eze ọdụm. Ha yikwasịrị onwe ha ihe mgbochi obi e ji igwe kpụọ. Nku ha na-eme mkpọtụ dị ka mkpọtụ a na-anụ mgbe ụsụ ndị agha na-aga ibu agha. Ha nwere ọdụdụ na-agba agba dị ka akpị. Ma ike nile e nyere ha imerụ ndị mmadụ ahụ ọnwa ise dị nꞌọdụdụ ha. Onye ahụ na-achịkọta ha bụ eze olulu ahụ omimi ya na-enweghị nsọtụ. Aha ya nꞌasụsụ Hiburu bụ Abadọn. Nꞌasụsụ Griik a na-akpọ ya Apọliọn. (Ma nꞌasụsụ Igbọ a ga-akpọ ya Onye mmebi.)